သက်တန့်ချို: လူတွေကြောက်နေကြတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ် ဆိုတာ ဘာလဲ
လူတွေကြောက်နေကြတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ် ဆိုတာ ဘာလဲ
အခုတလော လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်အကြောင်းရေမယ်စိတ်ကူးပြီးအလုပ်ပိနေတာနဲ့ တော်တော်နဲ့မရေးဖြစ်ဘူး ။ လေဆိပ်တွေမှာလည်း ၀င်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေမှာ အဖျားရှိမရှိစစ်ဆေးပြီး အဖျားရှိနေတဲ့ လူနာတွေကို ကုသစောင့်ရှောက်ထားတယ် နိုင်ငံအတွင်းပေးမ၀င်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ် ။ တလောက facebook လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာလည်း အီဘိုလာဗိုင်းရပ်ကြောင့် အနာတွေပေါက်ပြီး ဖျားနာတဲ့ပုံတစ်ပုံဆိုပြီးတက်လာပါတယ် ။ ဒီတော့ အများစုကြောက်လန့်နေကြတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်ဆိုတာ ဘာကောင်ကြီးလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်လာပါပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လတ်တလော Outbreak ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် သို့လောသို့လော ကြောက်လန့်နေကြတာထက်စာရင် ဒီကောင်ကြီးအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လေ့လာကြရအောင် ။
ပထမဆုံး အီဘိုလာဆိုတာ ဘာလဲမပြောခင် ဘယ်ကနေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာလဲဆိုတာ အနည်းငယ်ရှင်းပြပါရစေ ။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ အီဘိုလာဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြန့်ပွားမှု ၂ ခုဖြစ်ခဲ့တယ် ။ Nzara , Sudan နဲ့ Yambuku , Democratic Republic of Congo စတဲ့နေရာတွေမှာပါ ။ အီဘိုလာဆိုတဲ့မြစ်အနားမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကနေ စတင်ပြန့်ပွားတာမို့ အီဗိုလာ ဗိုင်းရပ်လို့ မှည့်တွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ် ။ တကယ်တော့ Ebolavirus ဟာ အုပ်စု သုံးခုဝင် Filoviridae family ( Filovirus ) ထဲက တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး သူ့ မျိုးဗီဇတွေကတော့ Marburgvirus နဲ့ Cuevavirus တို့ဖြစ်တယ် ။ အီဘိုလာလို့ခေါ်ကြတဲ့ နာမည်မှာ မျိုးစိတ် ငါးခုရှိပါတယ် အဲဒါတွေကတော့ Bundibugyo ebolavirus (BDBV) , Zaire ebolavirus (EBOV) , Reston ebolavirus (RESTV) , Sudan ebolavirus (SUDV) , Taï Forest ebolavirus (TAFV) စတာတွေဖြစ်ပါတယ် ။ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်ကို သိဖို့ဆိုရင်အဓိက၆ ချက် သိရပါမယ်။
၁ ။ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဆိုတဲ့ EVD ကို အီဘိုလာ အဖျားငန်းတက်ရောဂါ Ebola Haemorrhagic fever လို့ခေါ်ကြပြီး လူတွေမှာဖြစ်ရင်ပြင်းထန်တယ်သေစေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ် ။
၂ ။ တစ်ခါပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားမှု Outbreak ဖြစ်ပြီဆိုရင် သေစေနိုင်တဲ့ နှုန်း Fatality rate ဟာ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ် ။
၃ ။ အထူးသဖြင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတာက အာဖရိကအလယ်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းနဲ့ မိုးသစ်တော အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ ကနဦးစဖြစ်ခဲ့တယ် ။
၄ ။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကနေ လူတွေကို ကူးစက်ပြီး လူတွေမှာတော့ လူသားအချင်းချင်း human to human transimission ကူးစက်လေ့ရှိတယ် ။
၅ ။ Fruit bats လို့ခေါ်တဲ့ လင်းနို့တွေ ( Pteropodidae family ) ဟာအီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်တွေအတွက် သဘာဝလက်ခံကောင် Natural host ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
၆ ။ အရမ်းဖျားနေတဲ့လူနာတွေဟာ အရေးပေါ်ကုသမှု စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့လူမှာဖြစ်စေ တိရိစ္ဆာန်မှာဖြစ်စေ လိုင်စင်ရထားတဲ့ ကုသမှု ဆေး ( vaccine - ဗက်ဆင်း) မရှိသေးပါဘူး ။
အီဘိုလာဟာ လူတွေကို ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကထွက်တဲ့အရည်တွေ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေ သွေးတွေ ကနေတဆင့်ကူးစက်တတ်ပါတယ် ။ အာဖရိကမှာဆိုရင်တော့ ဒီရောဂါဟာ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ချင်ပန်ဇီမျောက်တွေ လူဝံတွေ လင်းနို့တွေ မျောက်တွေ ကို ကိုင်တွယ်ရတဲ့လူတွေကို မိုးသစ်တောတွေထဲမှာ ဖျားနာ ခြင်းသို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ အီဘိုလာဟာ လူထုထဲကို လူလူခြင်းကူးစက်တဲ့နည်းနဲ့ရောက်လာတယ် တိုက်ရိုက်ကူးစက်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တဲ့ အရေပြားမှတဆင့်ကူးစက်ခြင်း mucous membranes ချွဲသလိပ်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သွေးတွေ ကလီစာတွေ နဲ့ အရည်တွေ ရောဂါဖြစ်တဲ့လူ body ကနေထွက်တဲ့ အရည်တွေကနေတဆင့် သွယ်ဝှိုက်သောနည်းအနေဖြင့်လည်း အဲဒီအရည်တွေ ထိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆင့်လည်းရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ ဖျားနာခြင်းကနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အမျိုးသားယောက်ျားတွေမှာ သူတို့ရဲ့ သုတ်ရည်ကနေဆင့် နေကောင်းပြီး ၇ ပတ်အတွင်းမှာတောင် တခြားလူကို ရောဂါကူးစက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ EVD ကို သံသယဖြစ်သည်ဖြစ်စေ confirm ဖြစ်ပြီးလူနာကိုဖြစ်စေ ကုသတဲ့ ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေမှာ ဒီရောဂါကူးစက်ခံရလေ့ရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် Infection control precaution လို့ခေါ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ထိမ်းချုပ်မှု သတိပေးချက်တွေကို လိုက်နာမှု နည်းတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေမှာ ကူးစက်ခံရမှုများပါတယ် ။
မျောက်တွေ ၀က်တွေကို ကိုင်တွယ်နေရတဲလူတွေဟာ Reston ebolavirus ကူးစက်ခံရလေ့ရှိပြီး အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ကူးစက်ခံရလေ့ရှိသူတွေမှာတောင်မှ ဘာရောဂါ လက္ခဏာတွေမှမပြသတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် တစ်ခုတည်းသော ရရှိနိုင်တဲ့သက်သေကတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ကနေဆင့် လူထုထဲကို ကိုယ်ခံအားကျနေတဲ့လူတွေ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့လူတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေနဲ့ကလေးတွေကိုကူးစက်ကြပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အထိတွေ့အကိုင်အတွယ်များတာ မွေးမြူရေးလုပ်တာ တွေကလည်း အမျိုးသားယောက်ျားတွေများလို့ဖြစ်ပါတယ် ။
ရောဂါ လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ ?
အီဘိုလာအဖျားရောဂါဟာ ပြင်းထန်တဲ့acute viral illness ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်အဖျားတက်လာတယ် နုံးခွေသွားတယ် ကြွက်သားတွေနာလာတယ် ခေါင်းကိုက်ခြင်း လည်ပင်းနာခြင်းတွေဖြစ်စေပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အန်လာမယ် ၀မ်းသွားတယ် အနီကွက်တွေပေါ်လာမယ် ကျောက်ကပ်နဲ့အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေချို့ယွင်းလာမယ် အချို့လူနာတွေမှာဆိုရင် အပြင်ပိုင်းရောအတွင်းပိုင်းရော သွေးယိုခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာဆိုရင်လည်း သွေးဖြူဥကျတာ သွေးခဲစေတဲ့ platelet အရေအတွက်လျော့နည်းလာတာ အသည်း အင်ဇိုင်းတွေမြင့်တက်လာတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ လူတွေမှာ ဆိုရင် သူတို့သွေးနဲ့ အရည်တွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ်ရှိနေသရွေ့ ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ရောဂါရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ စဖျားတဲ့အချိန်ကစပြီး ထုတ်ယူတဲ့ သုတ်ရည်ဟာ ၆၁ ရက်ကြာပြီးမှသာ Ebola virus က ခွဲ ထွက်ပါတယ် ။ ပိုးမွေးကာလလို့ခေါ်တဲ့ incubation ကာလဟာ ဗိုင်းရပ်စ၀င်ပြီးကာလကနေ ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာတဲ့အထိ ၂ ရက်နေ ၂၁ ရက်အထိကြာနိုင်ပါတယ် ။
ရောဂါ ရှိမှန်း ဘယ်လို Diagnosis လုပ်မလဲ ?
တခြားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ငှက်ဖျား တိုက်ဖွိုက် ၊ ၀မ်းရောဂါ ပလိပ် နဲ့တကွ ဦးနှောက်အမြှေးယောင် အသည်းယောင်အသားဝါ နဲ့ viral haemorrhagic fevers တွေဟုတ်မဟုတ်ကို အရင်အတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းတွေကနေတဆင့် အီဘိုလာ ဟုတ်မဟုတ် ကို diagnosed လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
လူနာတွေကနေထုတ်ယူတဲ့ သွေးရည်ကြည် သလိပ်တွေနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး အရာတွေဟာ အလွန်ပဲ ရောဂါကူးစက်စေနိုင်တာကြောင့် တိကျသေချာစွာ စမ်းသပ် လုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုပါတယ် ။
ကုသရမဲ့ လိုင်စင်ရ vaccine မရှိသေးပါဘူး ။ တခြား ဗက်ဆင်းတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ပေမယ့် ဒီရောဂါအတွက်အသုံးပြုလို့ရတာမရှိသေးပါဘူး ။ လူနာတစ်ယောက် အရမ်းဖျားနာလာပြီဆိုရင် သေချာ အထူးကြပ်မတ်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ် ။ လူနာတွေဟာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးတာ ခဏခဏဖြစ်မယ် ဒါကြောင့် ဓါတ်ဆားရည်ပြန်ဖြည့်သွင်းရသလို သွေးကြောတွေထဲကနေဆင့်လည်း electrolytes တွေသွင်းပေးဖို့လိုပါတယ် ။ သီးခြားကုသမှုမရှိပါ ဆေးအသစ်တွေကလည်း စမ်းသပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက် ဗက်ဆင်းလည်းမရှိပါဘူး ။ ၀က်တွေ မျောက်တွေနေတဲ့နေရာတွေကို ပိုးသတ်ထားခြင်းသန့်ရှင်းအောင်ထားခြင်း ( sodium hypochlorite or other detergents ) စတာတွေက ဗိုင်းရပ်ကို Activate မဖြစ်အောင် တားဆီးတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ရောဂါပြန့်ပြီ Outbreak ဖြစ်ပြီလို့ယူဆပါက ပထမဆုံးရောဂါဖြစ်တဲ့ လူဖြစ်စေ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေ သီးခြားထားရပါမယ် ။ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို သုတ်သင်ပြီး သေချာ မြှုပ်နှံခြင်းမီးရှို့ခြင်းပြုလုပ်ရပါမယ် ။ အထူးသဖြင့် တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူ ကူးးစက်မှု နှုန်းကိုလည်း လျော့နည်းစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ အဲဒီရောဂါဖြစ်တဲ့ ဧရိယာတ၀ိုက်ကို အ၀င်အထွက်မပြုလုပ်ရ ဧရိယာအဖြစ်သတ်မှတ်ရပါမယ် ။ ဒါမှသာ တခြားနေရာတွေကို ပြန့်ပွားမှုနည်းစေမှာပါ ။ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီမှာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ထားမှသာ လူတွေကို မကူးစက်စေမှာပါ သူတို့မှာ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်း လူတွေအနေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတာအကောင်းဆုံးပါပဲ ။
လူတွေမှာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ လူ နဲ့တိရိစ္ဆာန်ထိတွေ့မှုကို လုံးဝရပ်ဆိုင်းရပါ့မယ် ။ ဥပမာ မျောက်တွေ ၀က်တွေ ငှက်တွေကို ကိုင်တွယ်ခြင်း သူတို့အသားတွေ ကလီစာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစာတွေကို တားမြစ်ခြင်း စားသုံးခြင်းမပြုခြင်း ။ သူတို့ အရေပြားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်အထည်တွေ ၀တ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတွေကိုပါပြုလုပ်ရပါမယ် ။ သွေးနဲ့အသားတွေကို စားသောက်တဲ့အခါမှာလည်း အစိမ်းစားခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပြီး ကျက်သည်အထိကျက်အောင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှ စားသောက်သင့်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့အချက်တွေကတော့ Virus တစ်ခု Outbreak ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြုလုပ်နေကြတွေအတိုင်း Mask တွေ Protective clothing တွေနဲ့တကွ လက်အိပ်ဝတ်ဆင်ခြင်း ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်းတွေမှာ သေသေချာချာ ဂရုပြုခြင်းတွေကိုပါပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွေမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်တွေ ဖျားနာနေတဲ့လူတွေကို စစ်နေတာယခုပြုလုပ်နေပါတယ် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တက်လာတဲ့ ပုံထဲက လူနာကတော့ EVD ဟုတ်မဟုတ် confirmation မရှိသေးပါဘူး ။ ထပ်သိရရင်လည်းထပ်ရေးပေးပါ့မယ် ။ လောလောဆယ်တော့ outbreak မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။
ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတွေကတော့ လေဆိပ်မှာ ဖျားနာလူနာ စစ်ယုံသာမကပဲ ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလဲ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေဖျားနာမှု သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ပဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးမှုရှိမရှိသာမက ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာလည်း ဖျားနာ ပြီး အနီကွက်တွေ ထွက်တဲ့လူတွေကိုလည်း သေချာ စာရင်းပြုစုပြီး report လုပ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:52 PM
Labels: Public Awareness, ဆေးပညာဆိုင်ရာ
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) August 14, 2014 at 11:40 AM
သင်ရော ဘယ်လို လူစားမျိုးလဲ ?